Semale Studie: Inona no atao SEO Aminay?
Raha mampiasa Internet ny Internet, dia ataovy izay hahazoana ny vaovao ilaina. Ity no dikan'ny hoe (amin'ny orinasa) ny fahamailana an-tserasera amin'ny tranonkala iray. Tsy nisy tranonkala iray afa-tsy ny tranonkala iray tsara tarehy tao amin'ny vokatra finday (SERP's). Miaraka amin'ny fiantsoana dia ny mpividy indrindra no mividy izany amin'ny vidiny, dia manana safidy tsara kokoa amin'ny tranokala tsara indrindra ianao.
Lisa Mitchell, tompon'andraikitra eo amin'ny Customer Success Manager Semalt , dia manamarika ny maha-zava-dehibe ny SEO amin'ny famoronana tranonkala iray - photoshop resaltar colores del.
Nandritra ny taona vitsy lasa izay, ireo mpividy dia naniry ny hividy izay online hividianana azy. Hividy ny vokatra izy ireo raha oharina amin'ny vidiny. Raha tsy izany, ny ankamaroany dia tsy afaka mandalo amin'ny voalohany voalohany amin'ny valiny. Izany dia mampiseho fa ny tranokalanao dia tsy maintsy ilaina ho an'ny besinimaro. Eo am-pelatanan'ny mpisehatra toy izany, dia mametraka SEO ny sehatra lehibe indrindra amin'ny webdesign.
Tenenwoordig gaan webdesign en SEO tanana an-tanana. Hatramin'ny taona maromaro lasa izay dia nanapa-kevitra ny web designers mba hahitanao ny fomba fiasa vaovao, dia ny SEO amin'ny fananganana tranonkala. Inona no SEO lehibe ary inona no tombony amin'ny tranonkala? Izahay, ny tranonkala iray manontolo noforonina dia ny SEO dia mamadika ny tolotra, izay mamadika ny varotra. Tsy dia tsara loatra ny tranonkala, fa raha tsy afaka jerena ao amin'ny pejy voalohan'ny lisansa iray izany dia midika izany fa misy ny safidy. Izany dia ny SEO voamarina amin'ny tranonkala..Integration avy amin'ny SEO dia sarotra, tsotra amin'ny lafiny - navigation, fifandraisana, tranokely - ary tsara ny mandeha.
Tsidika, zoekwoorden en links
Ny tranonkalan'ny tranonkala dia voamarika fa tena zava-dehibe ho anao ny SEO. Rehefa miasa ny tranonkala amin'ny tranonkalanao, alao sary an-tsaina ny antsipiriany rehetra momba anao. Miaraka amin'izany, ny mpamaritra ALLE zo mpitati-tsoratra mety afaka hijery ny mpizara ao an-tokantrano dia natsanganao ao an-tokantranonao. Mankasitraka ny fomba fiasa ara-pihetseham-po toy ny nataon'i Google sy ireo karazana hafa.
Raha tianao ny hampiditra anao ao anaty tranonkala, dia ampio ny fotoana ahafahanao mampiasa izany mba tsy hampifanaraka ny paikady raha tsy misy ny SEO.
Ny rohy fananganana dia manampy anao hifandray amin'ny tranonkala hafa hafa ao amin'ny Internet.
Ny fanorenana tranonkala tsara tarehy
Raha vao tonga ny fotoana, dia nanapa-kevitra ny hanampy ny mpilatsaka an-tsitrapo, namorona ny tranonkalan'ny SEO
Mitadiava fomba mora ampiasaina amin'ny alalan'ny tranokalan'ny tranonkala.
Ilay mpilatsaka an-tsitrapo mahay manadin-dàlana dia ny mamorona sary an-tsokosoko. Aza atao tsinontsinoavina fa manaparitaka ny orinasanao ny orinasan-tserasera, ka tsy tezitra izy. Eerste indruk gaat hier om. Ny vola dia maimaim-poana, nefa tsy voatery ho an'ny SEO. Raha toa ka tafiditra ao anatin'izany ny tranonkala, dia hahazoanao mandefitra amin'ny tranonkalanao, ary ny mpivarotra anao dia azo atao.
Ny tranonkalan'ny tranonkala dia mihamitombo, fa ny taona maro lasa izay dia nampiasaina ny teknolojia mba hanampy anao hampiditra ny SEO amin'ny tranokalanao. Up ny lalao.